Scot Nepal – Page 4
गोकुल बाँस्कोटाको प्रश्न : यो देशमा मकै पोल्नेका कुराको चासो कस्ले राख्छ होला र ?
काठमाडौं १९ असार । नेकपा एमालेका नेता तथा पुर्व मन्त्रीसमेत रहेका गोकुल बाँस्कोटाले साधारण मान्छेलाई खातेको दर्जा दिने देशमा मकै पोल्नेका कुराको चासो कस्ले राख्छ होला र ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्...
काठमाडौँ – पूर्वपंचहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा किचलो सुरु भएको छ । कमल थापालाई सानदार रुपले हराएर राप्रपाको अध्यक्षमा उदाएका राजेद्र लिंदेन पछिल्लो समय दबावमा पर्दै गएका छन् ।राप्रपाको आन्तरिक विवाद छरपस्टै...
सलमानलाई चुम्बन गरेर ट्रोल बने पछि शहनाजले ट्रोलरलाई दिइन् यस्तो जवाफ
काठमाडौं : ‘बग बोस–१३’ की पूर्व प्रतियोगी शहनाज गिल आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका कारण निकै चर्चामा रहने गरेकी छन् । यसो त सिद्धार्थ शुक्लाकी प्रेमिकाको रुपमा चिनिएर बढी पहिचान बनाएकी उनले अब छिट्टै...
केही समय पहिले धेरै उतार चढाब भोगेकी समीक्षा अब भने पुरानै लयमा फर्कदै
असार : गायिका समीक्षा अधिकारी फेरी पुरानै लयमा फर्कन लागेकी छन् । केही समय पहिले उतार चढाब भोगेर केही विवादमा तानिएकी उनी पुनं पुरानै लयमा फर्कन लागेकी छन् । कुनै समय समीक्षा...
बालेनले फोहोर व्यवस्थापनको लागि दिए यस्तो निर्देशन !
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक गल्लीमा थुप्रिएको फोहोर केही समय टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा छोपेर राखिने भएको छ । कामपाका मेयर वालेन्द्र साहले सबै वडालाई नियमित रुपमा फोहोर संकलन गरी टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा...
मुम्बई । बलिउड अभिनेता रणवीर कपूर हालका दिनमा नयाँ फिल्म ‘शमशेरा’लाई लिएर चर्चामा छन् । यो परियिड ड्रामा फिल्मको प्रमोसनमा रणवीरले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । रणवीर बाल्यकालदेखि नै ‘हिरो’सँगै ‘भिलेन’को...
ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा शनिबार आयोजित ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान’ को प्रथम विशेष भेलामा प्रमुख अतिथिको रुपमा निम्ताइएका थिए– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह।६ पन्ने अवधारणापत्रसहित अभियानका संयोजक डम्बर साहुले स्वतन्त्र अभियानका उम्मेदवार...
ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा आजबाट सुरु भएको ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान’ विशेष भेला सुरु भएको छ।भेलामा आगामी आम निर्वाचनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे निश्कर्ष आउने जनाइएको छ। साथै, स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न आवश्यक मापदण्ड...
आलिया भट्टको सन्तानपछि तैमुर अली खानको स्टारडम घट्दै , राखी सावन्तको भविष्यवाणी सुनेर सबै छक्क परे
राखी सावन्तलाई ड्रामा क्वीन भनिन्छ । उनी प्रायः कुनै न कुनै कारणले चर्चामा आउने गर्छिन् । उनी फेरि पनि आफ्ना केही भनाइका कारण चर्चामा छन् । वास्तवमा राखीले आलियाको बच्चालाई तैमुरसँग तुलना...